Ra’iisal wasaare ku-xigeenka XFS oo Guddiyada Doorashooyinka kula dardaarmay in ay si daacad ah u gutaan shaqooyinka horyaalla+(SAWIRRO). | Somali National Television - sntv.so
Home VILLA SOMALIA Ra’iisal wasaare ku-xigeenka XFS oo Guddiyada Doorashooyinka kula dardaarmay in ay si...
Ra’iisal wasaare ku-xigeenka XFS oo Guddiyada Doorashooyinka kula dardaarmay in ay si daacad ah u gutaan shaqooyinka horyaalla+(SAWIRRO).
Ra’iisul Wasaare Ku Xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) oo tababar u furay Guddiyada Doorashooyinka ayaa kula dardaarmay shaqooyinka horyaalla in ay si daacada u gutaan.
Previous articleGuddomiyaha Cusub ee Gobolka Shabeellaha hoose oo xilka la wareegay+(SAWIRRO).
Next articleRoobab iyo Dabeylo wada socda oo aad u xoogan ayaa caawa ka dhacaya Gobolka Bari Puntland Soomaaliya.